एउटा स्काउटरको भावना : 'मैले देखेको सपनामा नेपाल स्काउट' - Rojgar Manch
बिहिबार, ५ असार, २०७६
आज २०७६ असार ५ अर्थात विस २००९ साल असार ५ गतेबाट गन्दा आज ठ्याक्कै ६७ वर्ष पुरा गरेको नेपाल स्काउट । यो अवसरमा यो संस्था संग जोडिएका साना कव वाउन्ड स्काउट, ब्वाइ गल्र्स स्काउट, रोभर रेन्जर स्काउट, विभिन्न तहका स्काउटर, पदाधिकारी शुभचिन्तकहरुमा नेपाल सकाउटको ६७ औं स्थापना दिवसको शुभकमना व्यक्त गर्न चाहन्छु।
तत्कालीन राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाहदेवबाट नारायणहिटी दरवारमा झण्डोत्तोलन गरि स्थापना गरेको नेपाल स्काउटको इतिहास आज सम्म आउँदा उतारचढावबाट वितेको छ । आज अरु कुनै कुराको बारेमा नलेखी मैले चाहेको र खोजेको नेपाल स्काउटको बारेमा लेख्न मन छ ।
२०५२ फाल्गुन तिरको कुरा हो, भोलीपलट शिवरात्री थियो, दिक्षा नलिउ त भोलीको सेवा क्यापमा जान पाइने थिएन । सुरज खनाल, लवप्रसाद त्रिपाठी, योगराज शिल्पकार सरहरु हुनुहुन्थ्यो दिक्षाको कार्यक्रममा । कुनै पनि कार्यक्रममा आउन नचाहने पछि मात्र दिक्षा पाए मैले । तर यो चलन अहिले पनि चलिरहेको छ । यो प्रथाको अन्त्य होस् र दिक्षा जस्तो कार्यक्रम हतारमा नभई नियमित रुपमा पूर्ण तयारीका साथ भएको हेर्न चाहन्छु म ।
मलाई थाहा थिएन त्यो बेला मेरो विजयस्मारक स्काउट ग्रुपमा मलाई स्काउट सिकाउन आउने सरहरु कहाँबाट खटाइन्थ्यो भनेर । धेरै पटक रानीपोखरी नजिकको रातोघरमा गएर स्काउट मास्टर पठाइदिन भन्न गएको छु । तर स्काउट मास्टर त स्कुलले नै ल्याउने रहेछ । अव त स्काउट मास्टरहरु पनि धेरै भइसके, नेपाल सरकारले पनि स्काउट शिक्षालाई अनिवार्य बनाइदिएको छ । एउटा स्काउट मास्टरले युनिट चलाइरहेको युनिटमा गएर अर्को मास्टरले नानाधरी कुरा गरेर सबैमा स्काउट कक्षा चलाइदिन्छु भन्ने प्रथा हाम्रा पालामा हटोस्, यसलाई पेशाको रुपमा भन्दा पनि सेवाको रुपमा लिइयोस, मैले भन्न खोजेको कसैको रोजीरोटी छिन्ने होइन बाढेर खान बानी बसालियोस् ।
हाम्रा अति आदरणीय गुरुहरु जो आफ्नो जीवनको लामो कालखण्ड सृजनशिल समय यस संस्थामा समर्पित गर्नु भएको छ वहाहरुको कुरा फरक पर्नु पनि अन्त्य होस् । इतिहासको कुरा गर्दा स्थापनाको तालिममा कति जना सहभागी थिए, कहाँ भएको थियो ? त्यस्ता कुराहरुले हामी जस्ता युवा पुस्तालाई निरुत्साहित बनाउँछ । हामी स्काउटमा मित्रता बढाउँछ भन्नलाई भन्ने गर्छौ तर यथार्थ अर्कै छ, हाम्रा पुजनीय गुरुहरु एकै ठाउँ बस्न सक्नु हुन्न, वहाहरुको आ आफ्नै इतिहास छ । तालिम, पोशाक, न्युजसिष्टम, झण्डोत्तोलनको गतिला व्यवस्था गर्न सकिएको छैन । ऐन, कानून, पदको मामिलामा हामी छिमेकी राष्ट्र भारत र बंगलादेशको उदाहरण दिन्छौ, तालिम, पोशाक, व्याच, झण्डोत्तोलन पनि उनीहरु जस्तै बन्न सकोस्, मेरो इच्छा ।
तालिमहरु प्रतिष्पर्धाको रुपमा नगरी नियमपूर्वक योजनावद्ध, उसले दिएको समय, शीपको आधारमा दिइयोस्, संस्थामा संख्या बढ्नु राम्रो कुरा हो तर संख्या बढ्छ भनेर योग्यता, क्षमता, शिप, इच्छा नबुझि भर्ना गर्र्दा दीर्घकालीन हानी हुन्छ ।
संस्था जोगाउन कहिले कहि आफ्नो फाइदाबाट टाढा गएर पनि निर्णय गर्न सक्नु पर्दछ । हो हाम्रो संस्थालाई हेर्ने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई छ, त्यसो भन्दैमा मन्त्रालय राजनीतिज्ञ हुन्, , पदेन हुन्छन् आज एउटा आउँछ, पछि अर्को आउछ । त्यसैले कुन निर्णय गर्दा संस्थालाई रामो हुन्छ त्यो कार्यकारीमा बसेका साथीहरुले गर्नु पर्छ । इतिहासले नधिक्कारोस्, तपाई हामीलाई ।
अझै पनि सकिन्छ भने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट शिक्षा मन्त्रालयमा लाने प्रयास गरियोस्, इतिहासमा जे भएको हो त्यो लेख्ने आट संस्था हाक्ने कार्यकारी साथीहरु र लिडरहरुमा होस् । २०६८ साल र २०७१ सालको आन्दोलनलाई कुनै पनि त्यस पछि आएका कार्यकारीहरुले संस्थागत गर्न सकेनन् । अहिले धुमचुम गरेर स्काउट धान्ने साथीहरुले छातीमा हात राखेर स्काउटको नियम प्रतिज्ञालाई सम्झिनुहोस्,र भन्नुहोस्, के तपाइहरु त्यौ स्थानमा पुग्न हैसियत राख्नु हुन्छ रु युवाहरुको आन्दोलन नभएको भए । आफ्नो पृष्ठभूमि हेर्नुहोस्, अनि अरुलाई औला देखाउनुहोस् ।
एउटा कुरा त भन्नै विर्सेको, २०७१ सालको आन्दोलनमा धेरै साथीहरुको अनसन बस्ने इच्छा र तागत थियो । के आमरण अनसन एकजना मात्रै बस्ने नियम छ ? जसरी म गले पछि रमिला बहिनीले एक्यवद्धता जनाएर बसिन्, किन अरु कसैले नबसेको ? अझै पनि भन्छु, आउनुहोस्, अव त कित्ताकाट पनि भइसक्यो, कसै एकले अर्को अगाडी अनसन रहरै भए, रहरले खेल खेलिन्छ, अनसन बसिन्न साथी हो ।।।
अनि केहि वर्ष अघि पूर्व आयुक्तलाई मैले रक्सीको गिलासले हाने भन्ने कुरो, एकै ठाउँमा वहालाई राखौ अनि त्यस समयका सबै जना बसौ र भनौ कस्ले हानेको रक्सीको गिलास ? म भन्छु पूर्व प्रमुख आयुक्तले नशाको सुरमा मलाई हानेको हो रक्सीको गिलासले ।
मैले हेर्न खोजेको नेपाल स्काउट युवा सहभागितामा वयश्कको नेतृत्व र अग्रजको मार्ग निर्देशन हो नाकि मन्त्री फेरिदै गर्दा हुने नेतृत्व परिचालन । आज यो लेखबाट भन्न चाहन्छु नेपाल स्काउट सबैको हो, बालक, बालिका, युवायुवती र वयश्कहरु सबैको । नेतृत्व हाम्रो भन्दा पनि राम्रो हुनु पर्छ, ऐन राम्रो भन्दा पनि हाम्रो हुनु पर्छ ।
नेपाल स्काउट ।